नकारात्मक सोचबाट कसरी बच्ने ? | Yopoho Directory
नकारात्मक सोचबाट कसरी बच्ने ?
भनिन्छ, यदि गलत आदत बस्यो भने त्यसबाट पिछा छुटाउन गा¥हो हुन्छ । ठिक यसै गरी यदि कुनै व्यक्तिको जीवनमा नकारात्मकता आयो भने त्यसलाई हटाउन कठिन हुन्छ । नकारात्मकताका कारण दिनभरि दिमागमा नकारात्मक सोच आउँछ र व्यक्ति बिस्तारै त्यसको जालमा फस्दै जान्छ । कुनै पनि व्यक्तिका लागि नकारात्मकताको जालोबाट छुटकारा पाउन सजिलो हुँदैन ।
नकारात्मक सोच प्रति मानव प्रवृत्ति
कुनै पनि गलत कुरा प्रति मानव प्रवृत्ति केही अनौठो हुन्छ । एउटा व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा वा नकारात्मक विचार प्रति छिटो आकर्षित हुन्छ र जीवनमा सजिलै प्रवेश गर्न दिन्छ । हाम्रो वरिपरि र प्रकृतिमा यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, जसमा सकारात्मक र नकारात्मक ऊर्जाहरू हुन्छन् । तर मानवीय प्रवृत्तिका कारण हामीलाई गलत कुरा गर्नमा नै आनन्द आउँछ । शायद यसै कारण हामी नकारात्मक ऊर्जालाई छिटो ग्रहण गर्छौ । नकारात्मक ऊर्जा हामी भित्र प्रवेश गर्ना साथ छिटो गतिमा बढ्न थाल्छ ।
नकारात्मक सोचको सुरुवात
कुनै व्यक्तिको जीवनमा नकारात्मक सोचले त्यस समयमा प्रवेश गर्छ, जब उसले स–साना कुरामा नकारात्मक कुरा सोच्न थाल्छ । यिनै स–साना कुराहरूले गर्दा नकारात्मकताले हाम्रो दिमागमा आफ्नो स्थान बनाउँछ । त्यसपछि व्यक्तिले नकारात्मक सोचको जालमा फसेर नकारात्मक काम पनि गर्न थाल्छ । यस्तै विचार लामो समय सम्म रहने हो भने उ नकारात्मक विचारको जंजालमा फस्छ र नकारात्मक विचार बिस्तारै उसको आदत बन्न पुग्छ । त्यसपछि व्यक्तिले चाहेर पनि त्यसबाट पिछा छुटाउन सक्दैन ।
नकारात्मक सोचमा चुम्बकीय शक्ति हुन्छ
हामीलाई चुम्बकको गुणको बारेमा राम्रो सँग थाहा छ । नकारात्मक सोचले पनि एउटा चुम्बकले जस्तै काम गर्छ । यसले हाम्रो वरिपरिको सबै नकारात्मक सोचलाई आफूतिर आकर्षित गर्छ । निरन्तर गलत विचारको भाइब्रेसनले हाम्रो दिमागमा दिनभरि नकारात्मक विचार आई रहन्छ र त्यसको प्रभाव छोड्छ । नकारात्मक विचार यति शक्तिशाली हुन्छ कि हामी भित्र भएको सकारात्मक विचार माथि सजिलै हाबी हुन्छ । जसबाट बिस्तारै हामी एउटा नकारात्मक व्यक्ति बन्न पुग्छौ ।
नकारात्मक सोचलाई कसरी रोक्ने ?
नकारात्मक सोचलाई हामी आफ्नै द्धारा रोक्न सक्छौ । हामी आफ्नो मनको मालिक हौँ । कुनै पनि विचार हामी भित्र कति बेरसम्म रहन्छ, यो हामी आफै निर्धारण गर्छौ । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको नकारात्मक विचारलाई आफ्नो मनमा २ सेकेन्ड भन्दा बढी टिक्न नदिनुहोस् । यदि अन्जानमै मनमा नकारात्मक सोच आए पनि तुरुन्त आफ्नो मनबाट निकाली दिनुहोस् । नकारात्मक विचारलाई रोक्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय त्यसलाई आफ्नो मनमा आउने अनुमति नै नदिनु हो । उदाहरणका लागि यदि तपाई हिँड्ने बाटोमा काँडा छ भने तपाई त्यसको छेउबाट हिँड्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, जसबाट तपाईलाई नघोचोस् । तपाई जानी जानी बिचबाट हिँड्नुहुन्न । यदि तपाई त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ भने तपाईको खुट्टामा काँडाले रोप्नेछ र रगत निस्किनेछ । नकारात्मक सोच पनि ठिक यस्तै हुन्छ । त्यसैले यसबाट पन्छिने प्रयास गर्नुहोस् । जानी जानी नकारात्मक कुरा धेरै नसोच्नुहोस् ।
नकारात्मक विचारको दुष्परिणाम
नकारात्मक विचारको दुष्परिणाम भयङ्कर हुन्छ । यो ज्यानमारा पनि हुन सक्छ । नकारात्मक सोच हिलो समान हो, यदि सेतो कपडामा लाग्यो र तुरुन्तै धोएन भने कपडा नै बिगारी दिन्छ । हिलोले तपाईको लुगालाई फोहर बनाउनुका साथै दाग बस्छ । यसै गरी नेगेटिभ विचारबाट ग्रसित व्यक्तिको जीवन पनि नकारात्मक क्रियाकलापका कारण दाग युक्त बन्न पुग्छ ।
Next: डण्डीफोरको प्रकृति अनुसार सही उपचार